San Diego, CA • Body Mass sy NuRu Massage
Mialà sasatra aorian'izay miaraka amin'ny iray amin'ireo mpanotra ho an'ny fikosoham-batana erotika na fanorana Nuru fanasana San Diego, CA!
San Diego dia tanàna iray ao amin'ny fanjakan'i Etazonia any California amin'ny morontsiraky ny Oseana Pasifika, sahabo ho 120 kilaometatra atsimon'ny Los Angeles ary eo akaikin'ny sisintany miaraka amin'i Mexico no misy azy. Miaraka amin'ny tombatombana 190 mponina hatramin'ny 1,425,976 Jolay 1, San Diego no tanàna lehibe indrindra fahavalo any Etazonia ary faharoa lehibe indrindra ao Kalifornia. Mandrosoa rehefa avy eo miaraka amin'ny iray amin'ireo mpanotra manosotra vatana erotika or Nuru massage San Diego, CA fomba!
Jereo daholo (17)
Fanorana Nuru ara-nofo